Geessitoota Gulaaluu - LibreOffice Help
Yommuu geessituu galmee Barreessaa keessaa Ctrl-cuqaasi gootu, iyyaafataan saphaphuu kee teessoo saphaphuu gaafatameen banama. Yoo hantuutee hin fayyadamtu tahe, qaree keessa geessituu qubachiisiiti baafata halqaraa Shift+F10 tiin bani, achii Geessituu Bani fili.
1 Barruu Geessituu akka armaan gadiitti jijjiiri
2 URL Geessituu akka armaan gadiitti jijjiiri
3 Amala geessitoota hundaa jijjiiri
4 Qabduu geessituu gulaali
Barruu Geessituu akka armaan gadiitti jijjiiri
Galmeewwan Barreessaa keessaa, garakeessa geessituu bakka halle cuqaastee barruu mul'atu gulaaluu ni dandeessa.
Qaree bakkawayii qubachiisuun geessituu yoo dhiifte, barruun mul'atu qofti ni jijjiirama.Arfii eddoo sududaan arfii isa dhumaa hordofuun galchuun geessituu yoo dhiifte, OfiinSirreessaan yoo dandeessifame URL galtee akka barruu mul'ataa waliin wal fakkaatutti jijjiira.*Gosoota galmee hundaa keessaa, geessituu gulaaluuf qaaqicha Geessituu banuu ni dandeessa. Jalqaba qaree garakeessa geessituutti yookiin sududaan fuuldura geessituutti qindeessii, achii kabala Walta'inaa irraa sajoo Geessituu cuqaasi.
URL Geessituu akka armaan gadiitti jijjiiri
Dirqala 1: Akka gubbaatti ibsame, Qaaqa Geessituu bani.
Amala geessitoota hundaa jijjiiri
Foddaa Akkaataalee fi Dhaangessuu bani.
Sajoo Akkaataalee Arfii bani.
Akkaataa arfii "Geessituu Intarneetii" yookiin "Geessituu Intarneetii Imaalame" mirga cuqaasiitii, Fooyyessi fili.
Qaaqa keessaa, amaloowwan haaraa filiitii, TOLE cuqaasi.
Qabduu geessituu gulaali
Yoo geessituun qabduudha tahe, isa filachuuf handaaricha irraatti cuqaasi, yookiin osoo cuqaasaa jirtuu furtuu Alt dhiibi. Karaa baafata halqaraa qaaqa Amaloota bani. Barruu moggaasaa "Goodayyaa" jalaa gulaaltee, teessoo dirree "URL" keessaa fooyyessuu ni dandeessa.
Geessitoota Sadhaatawaa fi Haqaa
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Common/Editing_Hyperlinks/om&oldid=405396"
This page was last edited 16:21:05, 2013-04-08 by LibreOffice Help user WikiSysop.